राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल : अपराजित रहँदै एपीएफ च्याम्पियन - Jagaran Post
राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल : अपराजित रहँदै एपीएफ च्याम्पियन
जागरणपोस्ट ७ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार २१:२९
त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा एपीएफका लागि सरु लिम्बुले दुई तथा अनिता केसीले एक गोल गरिन । खेलको ४५औं मिनेटमा लिम्बुले गोल गर्दै एपीएफलाई अग्रता दिलाएकी हुन् । यस्तै खेलको ८६औँ मिनेटमा केसीले गोल गर्दै एपीएफलाई २–० गोलको अग्रता दिलाईन । खेलको इन्जुरी समयमा लिम्बुले नै व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै एपीएफलाई ३–० गोलअन्तरले उपाधि जिताईन ।
एपीएफले लगातार तेस्रो पटक लिगको उपाधि जितेको हो । एपीएफले १२ खेलमा ३६ अङ्क जोड्यो । आर्मीले १२ खेलमा २६ अङ्क जोड्यो । उपाधिसँगै एपीएफले रु १५ लाख तथ उपविजेता बनेको आर्मीले रु. आठ लाख पुरस्कार प्राप्त गरेको छ ।
लिगमा तेस्रो भएको नेपाल पुलिस क्लबले रु. पाँच लाख तथा चौथो भएको स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले रु तीन लाख पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । यस्तै प्रतियोगिताको रु एक लाख ५० हरजारसहित फेयर प्ले टिमबाट चन्द्रपुर नगरपालिका पुरस्कृत भयो । प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी एपीएफकी सरु लिम्बु घोषित हुनुभयो । उनले पुरस्कारस्वरुप एक थान स्कुटर प्राप्त गरिन ।
यस्तै प्रतियोगिताको उत्कृष्ट फरवार्डको उपाधि एपीएफकै सावित्रा भण्डारी, उत्कृष्ट गोलकिपर नेपाल पुलिस क्लबकी उषा नाथ, उत्कृष्ट डिफेन्डर पुलिसकै अम्रिता जैशी, उत्कृष्ट मिडफिल्डर आर्मी फुटबल क्लबकी बिमला चौधरी तथा उत्कृष्ट प्रशिक्षक एपीएफकी भगवती थापा घोषित भईन । उनीहरुलाई जनही रु ५० हजार पुरस्कार प्रदान गरिएको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)ले जनाएको छ ।
एभरेष्ट प्रिमियर लिग (इपिएल) असोजमा हुने
‘बी’ डिभिजन लिग फुटबलमा आज पनि दुई खेल
तीव्र गतिका बलर बुमराह इंग्ल्यान्डविरुद्ध नखेल्ने
दोस्रो तिलोत्तमा नगरस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको विजेता
क्रिस गेल र तीव्र गतिका बलर एडवार्ड्सले वेस्टइन्डिज
पीएसएल खेल्न सन्दीप कराँची प्रस्तान
१३ वर्ष मुनिका खेलाडीको छनोट गर्दै एन्फा